Hutano hweVasope Hwokanganiswa Zvakanyanya neKushaikwa kweMvura muMaguta
Kushaikwa kwemvura munzvimbo dzakawanda munyika kuri kuisa vasope panguva yakaoma sezvo vachipedza nguva yakareba vachipiswa nezuva vakamira mumitsetse pazvibhorani zvemvura.
Musope uye vari mukuru weAlbino Trust of Zimbabwe, VaBrian Nyoni, vanoti ganda remusope rikapiswa nezuva kwenguva yakareba, rinopedzisira rabatwa nezvirwere zvegomarara repaganda. VaNyoni vanoti zvakosha kuti makanzuru ematunhu ose akwanise kuwanira vanhu vakadai mvura nenzira dzisingaise hutano hwavo panjodzi.
VaNyoni vanoti kushaikwa kwemvura iyi kwaita kuti vanhu vanorarama nehusope vatadze kuzora mafuta anodzivirira kutsva nezuva nokuti mushonga uyu unozorwa muviri kana munhu ambotanga ageza.
Mumwe weavo vane dambudziko iri, VaKudakwashe Kezzie Machiha, vanoti ndiro rinovhiringa zvanyanya ganda ravo, zvokuti vakatsva nezuva vanoita maronda anozoguma aita gomarara repaganda, rinova denda rinonetsa kurapa kana ranyenga.
VaMachiha vanoti zuva ririko mazuva ano rakanyanyisa zvokuti vana vadiki vane husope vanofanirwa kuchengetedzwawo zvakanyanyisa.
Nyanzvi munyaya dzehutano, Dr Tinotenda Michael Simemeza, vanoti hama nevagari vemunharaunda dzakasiyana siyana vanofanira kurerutsa mararamiro evanhu vane husope kuitira kuti vasanyanya kuita mabasa anoita kuti vapiswe nezuva.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti kubazi rezvehutano kuti zvii zvariri kuita pamatambudziko ari kusangana nevanhu vane husope.
Asi ongororo yakaitwa neZimbabwe Albino Association inoti vane husope vari kufa zvakanyanya nemagomarara epaganda nokuti vakawanda vavo vari kushaya mafuta okudzivirira makanda avo kupiswa nezuva.
Ongororo yakaitwa muZimbabwe muna 2015 yakaratidza kuti munyika maive nevanhu zviuru makumi masere vane husope.
Sangano reWorld Health Organisation rinotiwo munhu mumwe chete kubva pazviuru zvishanu zvevanhu, mudunhu reSouthern Africa, ane husope.